धेरै अक्सर iCloud iPhone बाट decouple कसरी को प्रश्न, नयाँ सवारी साधनको खरीद लागि मेरो "स्याउ" बेच्न वा केही गर्न एक राम्रो उपहार एक प्रेम बनाउन निर्णय गर्ने सोध्छन्। सामान्य मा, यो त महत्त्वपूर्ण छ। यो कार्यहरूको अनुक्रम थाहा साथै विधि र कार्य, यो सिर्फ को छुटकारा प्राप्त गर्न अनुमति छैन जो मामला मा एक आधारभूत सेट प्रयोग गर्न सक्षम हुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ को स्मार्टफोन एप्पल गरेको आईडी, तर iCloud iPhone बाट decouple कसरी को प्रश्नको जवाफ हुनेछ। यस लेखमा हामी बस प्रत्यक्ष र catchy, अभिव्यक्ति क्षमा के, नयाँ मालिक विश्वासीपूर्वक सेवा गर्न तयार एक राम्रो ग्लास र धातु मा यन्त्र प्रयोग गर्न गर्न लामो पहिले क्रममा कुरा तपाईं जाने तरिकाहरू।
के आवश्यक छ
कसरी iCloud देखि आईफोन उतारना गर्न सोध्दै हुनुहुन्छ, जो धेरै प्रयोगकर्ताहरू शायद पनि जवाफ सतह मा शाब्दिक निहित कि शक छैन। वास्तवमा, सारांश मा उल्लेख रूपमा, त्यहाँ सबै आवश्यक अपरेसन पूरा गर्न मानक प्रणाली क्षमताहरु प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ कि एक सरल तरिका हो। तथापि, केही कारणले तपाईं वा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ सक्नुहुन्छ छैन भने, तपाईंले सधैं यो कठिन बनाउन सक्छ। मात्र यो आवश्यक छ? हामी यो विषय को दार्शनिक जरा तल्लीन छैन, तर केवल ती विधिहरू बारेमा बताउनुहोस्। तर क्रममा सबै बारे। बस एकीकृत समारोह भनिन्छ कि सक्रिय लक प्रयोग, यो के गर्न: तपाईं को लागि तपाईं उपकरण को मालिक iOS7मा आधारित छ भने, iCloud देखि आईफोन उतारना कसरी सञ्चालन प्रणाली को प्रश्नको जवाफ, सजिलो हुनेछ।
के अनलक Ayklauda चाहिन्छ?
हामी यो अचानक हामी सामान्य मा यस कार्यका पूरा गर्न आवश्यक किन, को iCloud आईफोन लिङ्क हटाउन कसरी पहिलो पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्, र बारेमा मुद्दा बुझ्न पहिले। गरेको अवस्थामा बहाना गरौं। तपाईँलाई आफ्नो स्मार्टफोनको थकित हुनुहुन्छ र तपाईं नयाँ प्रतिस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ भनेर भन्न गरौं। कुनै कुरा यो उपकरण कस्तो छ र यो के अपरेटिङ सिस्टम चल्नेछ। मात्र कुरा हामी यस अवस्थामा रुचि, यन्त्रको नयाँ मालिक पक्कै, यसको कारखाना सेटिङहरूमा यन्त्र ड्रप गर्न चाहनुहुन्छ कि एक रिसेट बनाउन तथ्यलाई छ।
कुनै otvyazki थियो भने
घटनाहरू राम्ररी विकास र सुविधा भने सक्रिय लक पहिले (त्यसैले तपाईंको एप्पल आईडी र को प्रोफाइल otvyazka लगे छैन र फोन को पूर्व मालिक द्वारा असक्षम भएको छैन क्लाउड भण्डारण , को iPhone बाट iCloud) खरीदार छैन उपकरण सक्रिय। यस कार्यका लागि मुद्रा को एक सुग्घर योगफल बाहिर खोल छ जहाँ सेवा केन्द्र, जान - उहाँलाई लागि मात्र तरिका बाहिर। हाल यो सेवा लायक अधिक दस हजार छ। र यो चौथो आईफोनहरू र पाँचौं पुस्ताका लागि हो। तर उपकरणको छैटौं पुस्ता को अग्रिम अनटेदर को सक्रियता बारेमा पन्ध्र हजार रूसी rubles को भुक्तानी गर्न भने थप छैन लागि छैन। यो क्लाउड भण्डारणको आईफोन otvyazka मात्र सम्मान को एक कुरा, त्यसैले बोल्न पनि पैसा छ, तर बाहिर जान्छ।
IPhone 5s। iCloud देखि Unbind? सजिलै!
त्यसैले, हामी पहिले देखे जस्तै, आफ्नो उत्पादन वा दिन बिक्री अघि व्यक्तिगत प्रकृति को सबै जानकारी मेटाउन उपकरण हुन। तपाईं स्वयं यो के हुँदैन, छैन तुरुन्तै रिमाइन्डर र सम्पर्क, कागजात र मल्टिमिडिया डाटा मेटाउन हतार गर्छन्। भने, प्रयोग क्लाउड भण्डारण व्यक्तिगत परिचायक यी अपरेसन समयमा, त्यसपछि तपाईं स्थायी रूपमा सबै जानकारी गुमाउने जोखिम चलाउनुहोस्। "के त उदाहरणका लागि गरिन गर्न, iCloud देखि, आईफोन4decouple छ?" - प्रयोगकर्ता सोध्न सक्छ। र अब हामी रोचक भाग आउँछन्।
मेशिन आफ्नो निपटान मा छ भने
यस मामला मा, सुरु लागि, आईफोनहरू र बीच जडान हेर्छ , एप्पल वाच तपाईंले तिनीहरूलाई भने। भने, त्यसपछि अर्को वस्तुमा मा सार्न। र यो अपरेटिङ सिस्टम मा जगेडा उपकरण हो। जगेडा डेटा सिर्जना हुन्छ, सेटिङ मेनुमा जानुहोस्। एउटा वस्तु क्रमशः भनिन्छ कि त्यहाँ देख रहे: iCloud। हामी टिप्पणी बटन, हकदार छ जो सामग्रीहरू तल स्क्रोल भने "जाने।" तपाईँको फोन सातौं संस्करण चलिरहेको वा पहिले छ भने, तपाईँले "खाता मेट्न" भनिन्छ बटन थिच्न गर्न आवश्यक छ।
हामी सेटिङ खन्न
प्रारम्भिक सञ्चालन पुष्टि गर्न, "जाने" एक पल्ट थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं जो नाम "को iPhone हटाइएको छ", चयन गर्नुहोस् र तपाईंले केही समय पहिले व्यक्तिगत आग्रह पासवर्ड प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। तपाईंले गरेको बेला, यन्त्र सेटिङ देखि बिन्दु फिर्ता जानुहोस्। "कुञ्जी" हकदार खण्ड लागि त्यहाँ देख। यसलाई "dumping" को एक समारोह छ। हामी यसलाई क्लिक भने, त्यसपछि शीर्षक फेला "सामग्री र सेटिङहरू मेटाउन।" सेवा तपाईँको यन्त्र भनिन्छ जो "आईफोन फेला" मा सक्रिय छ मान्छु। भने, लेनदेन को त्यसपछि व्यक्तिगत आईडी र पासवर्ड प्रविष्ट गर्न सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुनेछ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू, खैर, प्रश्न सोध्न "पासवर्ड बिना iCloud आईफोन कसरी लिङ्क हटाउन?"। तर काम पहिले असक्षम गरिएको छ भने, यो गर्छ। त्यहाँ तपाईँले बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ केही छ।
अपरेटर को मद्दत Enlists
प्रक्रिया पूरा गर्न, सेवा प्रदायक सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँले वास्तवमा, तपाईंले आफ्नो उपकरणको नयाँ मालिक उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने सेवाहरूको नवीकरण लागि मद्दत माग्न सक्छौं छ। सिम कार्ड प्रयोग समयमा निर्माण भएको छैन भने गरिएको, तपाईं अझै पुन दर्ता छैन निर्दिष्ट गर्न अपरेटर सम्पर्कमा प्राप्त गर्न सक्छन्, र बस स्मार्टफोन भविष्य खरीदार लागि सेवाहरू डिजाइन।
के उपकरणहरु छैन भने?
यो मिसिन नयाँ मालिकको निर्णयाधिकार पास अघि तपाईं पहिले वर्णन गरिएको छ कि सबै चरणहरू पूरा भएको छैन सम्भव छ। तपाईं मौका छ भने, तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न प्रयास र तिनीहरूलाई अघिल्लो अनुच्छेद मा वर्णन कदम गरेर सेटिङ र उपकरण सामग्रीहरू मेटाउन अनुरोध। समारोह पहिले तपाईंले प्रयोग र iCloud सेवा "को iPhone फेला" यदि, तपाईं क्लाउड भण्डारण आधिकारिक वेबसाइटमा जानु पर्छ। तपाईं उपकरण डाटा चयन गर्न सक्नुहुन्छ र मेट्न संवाददाता प्रकार्य प्रयोग। यसलाई पहिले नै यी चरणहरू पूरा काम गरेन? त्यसपछि आफ्नो व्यक्तिगत परिचायक लागि पहिले तोकिएको थियो पासवर्ड परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यस मामला मा, आफ्नो उपकरण व्यक्तिगत जानकारी मेटाउन हुनेछ, तर यो गर्न सक्दैन, र स्मार्टफोनको नयाँ मालिक।
कसरी फोनमा ICQ स्थापना गर्न
फोन BQ: समीक्षा। सानो फोन BQ: तस्बिर, मूल्यहरु
एक स्टाइलिश र विश्वसनीय ग्याजेट लेनोभो S90। यस स्मार्टफोनको हार्डवेयर र सफ्टवेयर बारेमा टिप्पणी
फोन "Nokia N73": विशेषताहरु, फोटो, समीक्षा
कि "आईफोन" मा पोडकास्ट छ
कसरी "एन्ड्रोइड" (एन्ड्रोइड) मा सम्पर्क गर्न रिङटोन राख्न?
व्यापार विचार: ईटाहरु को उत्पादन। इँटा को उत्पादन को लागि प्रविधि र बोट
डिब्बाबंद माछाबाट सरल कप्लेटहरू
जमीन मासु र मसले आलु र टूना को patties संग Zrazy आलु
बच्चाहरु को लागि अभिनय: प्रशिक्षण कार्यक्रम
"Losterin": प्रयोगको लागि निर्देशन, दबाइ को विवरण, analogues
Mogilev क्षेत्र। Mogilev क्षेत्र को नक्शा
थाइरोइड हर्मोन लागि assays - को उपचार मा पहिलो सहायक
सबै "AliEkspress" प्रतिक्रिया दिन कसरी
"गोथिक 3" - वैकल्पिक रकम। के छ र के खाएको छ?
स्पाइडर पैसाबारे। houseplants को किरा